Uhlaziyo lweAirTag. Sikubonisa ukuba ubona njani ukuba eyakho ihlaziyiwe | Ndisuka mac
Uhlaziyo lweAirTag. Sikubonisa ukuba ubona njani ukuba eyakho ihlaziyiwe
Inkampani yaseCupertino yasungula uhlaziyo lwe-firmware kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo apho liphumeze ukuphuculwa kwemfihlo. Njengoko nisazi nonke, ezi zixhobo zihlaziya ngokuzenzekelayo umsebenzisi akunyanzelekanga ukuba athathe nawaphi na amanyathelo okufumana ukuphuculwa kwale firmware.
Ngoku umbuzo abasebenzisi abaninzi abanayo kukuba i-AirTag okanye i-AirTags zabo zifumene uhlaziyo oluhambelanayo. Inguqulelo entsha yesoftware ye-AirTag eyasetyenziselwa ngokuzenzekelayo, inombolo ye-1A276d kunye ne-firmware engu-1.0.276 ke Namhlanje siza kukubonisa indlela yokujonga ukuba ngaba isixhobo sakho sihlaziyiwe ibekwe.
Ujonga njani ukuba i-AirTag yethu ihlaziyiwe?
Umsebenzi unokubonakala unzima kodwa akukho nto iqhubekayo kwinyani kule meko kufuneka sisebenzise i-iPhone kuyo kwaye siza kukubonisa ukuba ungayenza kanjani. Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukufaka usetyenziso lokuKhangela. Ngoku xa singaphakathi kwesicelo sokuKhangela emazantsi sifumana amamenyu aliqela kwaye kufuneka ucofe ku «Izinto». Nje ukuba sicofe ngokulula Kuya kufuneka sibambe igama esilinike i-AirTag yethu kwaye kwakhona siza kucofa kwigama Phezulu, uya kubona ukuba inombolo ye-serial kunye ne-firmware ye-AirTag yakho ivela njani.
Kwimeko yam yobuqu, ndingatsho ukuba okwangoku uhlaziyo alukafiki kum, ndikwi-1.0.225 kwaye ndiyathemba ukuba izakuhlaziya kwiiyure ezimbalwa ezizayo. Ukuphuculwa kukwabandakanya uhlengahlengiso kubude bexesha ii-AirTags ezithathayo ukudlala isilumkiso esivakalayo emva kokuvalelwa kumniniyo ukongeza kuphuculo lwabucala. Kwelinye icala, inkampani yeCupertino iqinisekisile ukuba iyasebenza kwisicelo se-Android esiya kuthi sibhaqe ii-AirTags kunye nezinye izixhobo ezenzelwe ukuKhangela. Ngaba i-AirTag yakho ihlaziyiwe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Uhlaziyo lweAirTag. Sikubonisa ukuba ubona njani ukuba eyakho ihlaziyiwe
Namhlanje uthotho lwe-Apple TV lubonisa + Ibali likaLisey
Landela nathi inqaku eliphambili leWWDC 2021